यही गतिमा गन्दा मतगणना सकिन ९ महिना ७ दिन लाग्ने ! - Himalayan Kangaroo
यही गतिमा गन्दा मतगणना सकिन ९ महिना ७ दिन लाग्ने !
Posted by Himalayan Kangaroo | २ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०१:५९ |
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सोमबार दिउँसो २ बजे सुरु गरियो । साँझ ९ बजेसम्म (७ घण्टामा) जम्मा २ सय मत गनियो । एउटा मत गन्न सरदर २.१ मिनेट लाग्यो ।
काठमाडौं महानगरलाई नै उदाहरणका रूपमा लिने हो भने यहाँको मतपत्रमा ३ सय ७४ फरक चिह्न छन् । मतदातालाई चाहेको ठाउँमा मत हाल्न चिह्न भेट्न जति गाह्रो परेको थियो, गणनामा त्यही अवस्था दोहोरिएको छ । एउटै मतपत्रबाट प्रमुख र उपप्रमुखसहित ७ स्थानको मत निक्र्याेल गर्न समय लागिरहेको छ ।
अर्का्तिर धेरै मतदाता भएका स्थानमा मतगणना गर्ने ठाउँ पर्याप्त हुनुपर्नेमा निर्वाचन आयोगले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । ‘पहिलो चरणको मतगणना दोस्रो चरण (जेठ ३१) निर्वाचन पुग्दासम्म जारी रहलाजस्तो छ,’ सुस्त मतगणनालाई लिएर सोमबार सोसल मिडिया र बाहिर यस्ता टिप्पणी भए ।
उनले सबैको गुनासोलाई लिएर हरेक निर्वाचन अधिकृतसँग सल्लाह गरी एकै पटक दुईभन्दा बढी स्थानमा कसरी गन्न सकिन्छ भन्ने सोचेको बताए । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गरे मत हाल्ने र गणना गर्ने दुवैलाई सहज हुने बताए । उनले भने, ‘अब हामीले प्रविधिमार्फत निर्वाचन गराउनु आवश्यक छ । भविष्यमा आयोग र सरकारले निर्वाचनमा प्राविधिक सामग्री प्रयोगबारे ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र यस्तो अवस्था अन्त्य हुनेछ ।’
Previousकसैलाई मत नदिने अधिकार माग
Nextवितरण भएका सवा एक करोड सिम प्रयोगविहीन
बिपी र अरनिको राजमार्ग खुल्यो, राेशी खाेलामा फसेका दुर्इ मजदुरकाे उद्दार
२८ असार २०७५, बिहीबार ०७:०५
विषाक्त मदिरा सेवनबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो,मृतकमध्ये चार नेपाली
३ आश्विन २०७५, बुधबार ०२:५९
अनलाईन मिडिया माथी कडाई गरिने
२५ असार २०७५, सोमबार ०४:१४